Tantely Andrianarivo, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina : Efa voaheloka sy nanongam-panjakana -
AccueilRaharaham-pirenenaTantely Andrianarivo, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina : Efa voaheloka sy nanongam-panjakana
Efa mitodika any amin’ny taona 2018 hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny ankamaroan’ny mason’ny olom-pirenena. Maro ny adihevitra manodidina izany eny anivon’ny fiaraha-monina eny, betsaka ihany koa ireo fanontaniana ny amin’ny hoe: « iza avy ireo ho kandidà ary iza avy no afaka milatsaka amin’izany fifidianana filoham-pirenena izany?».
Azo taritina amin’izay tiana itarihana azy ny adihevitra mikasika izay fahafahana milatsaka hofidiana na tsia izay fa ny sata mifehy ny demôkrasia sy ny fifidianana ary ny fitantanana izay nosoniavin’ireo firenena mpikambana ao amin’ny Vondrona Afrikana tany Addis Abeba ny faha-30 Janoary 2007 dia manambara mazava tsara ao amin’ireo andininy avy ny foto-kevitra ijoroana momba izay resaka fifidianana sy demôkrasia izay.
Voalaza ao amin’ny CHAPITRE VIII, andininy faha-25 toko faha-4 ny hoe « Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat ». Raha atao dika tsotra io voalaza io dia tahaka izao: « Ireo rehetra nandray anjara tamina fanonganam-panjakana na koa fakàna fahefana mifanohitra amin’ny voalazan’ny lalam-panorenana dia tsy mahazo mandray anjara amina fifidianana na manana andraikitra amina andrim-panjakana ».
Mazava ny voalazan’ny andininy faha-25 toko faha-4 ao amin’io sata afrikana io ary anisan’ny nanao sonia izany i Madagasikara fa tsy mahazo milatsaka hofidiana ho filoham-pirenena intsony izay rehetra nanongam-panjakana sy naka fahefana tsy araka ny voalazan’ny lalam-panorenana. Indroa nisy fanonganam-panjakana teto amintsika nanomboka ny taona 2002 sy 2009: Marc Ravalomanana nanongana ny amiraly Didier Ratsiraka, Andry Rajoelina nanongana an’i Marc Ravalomanana. Tsy hiditra amin’ny adihevitra politika tsy mitondra tombotsoa ho an’ny firenena isika fa raha ampiharina araka ny tokony ho izy ny voalazan’io andininy io dia tsy afaka milatsaka hofidiana filoham-pirenena i Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana.
Raha horaisintsika indray ny ao amin’ny CHAPITRE III, andininy faha-3, toko faha-9 ao amin’io sata io dia manambara mazava tsara fa napetraka ho foto-kevitra ijoroana ny fanamelohana sy ny fanenjehana ny fandikan-dalana, ny « tsimatimanota » ary ny kolikoly sy izay mifandraika amin’izany. Izany hoe, ireo izay efa voasazin’ny Fitsarana noho ny fandikan-dalana, halatra, fanodinkodinam-bolam-panjakana dia tsy tokony hitantana na hanana andraikitra amina andrim-panjakana ao amina firenena iray mpikambana ao anatin’ny Vondrona Afrikana. Voakasik’izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nomelohan’ny Fitsarana higadra mandra-pahafatiny ny taona 2010, ny praiminisitra teo aloha Tantely Andrianarivo izay voaheloka hanao asa an-terivozona 12 taona tamin’ny 2003 ary ny amiraly Didier Ratsiraka izay nomelohan’ny Fitsarana hanao asa an-terivozona 10 taona tamin’ny 2003. Tsy ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana no nandrafitra ity sata ity, tsy ny antoko HVM rahateo koa fa firenena maro izay niara-nanao sonia izany koa raha milaza ireo mitonona ho Fianakaviambe Iraisam-pirenena fa tsy tokony hisy ny « ni…ni » dia tahaka ny manosihosy sy manitsakitsaka ny satan’ny Vondrona Afrikana ihany izany ary manome vahana ny kolontsaina « tsimatimanota » tsy nampisy filaminana sy fitoniana taty Afrika am-polo taonany maro.